I-China Isigaba sesithathu semitha yamandla ombane （abathwali, ii-lora, ii-gprs） abavelisi kunye nabaxhasi | UKUSindisa
Isigaba esine-wire-wire-wire / phase-phase ezintathu-wire-metres sisebenzisa isekethe enkulu edityanisiweyo kwaye isebenzise umlinganiselo wamandla ombane ochanekileyo. Ukubanakho kwemodyuli yonxibelelwano kunye nokuthembeka kukwafikelele kwinqanaba lokusetyenziswa okusebenzayo. Yamkela itekhnoloji yokuphanda isampulu yedijithali kunye nenkqubo ye-SMT, kwaye yenzelwe kwaye yenziwa ngokokusetyenziswa kwamandla kwabasebenzisi bemizi mveliso.
1. Ukubuyisa idangatye, kulula ukuyifaka
2. Imisebenzi esebenzayo kunye nokuSebenzayo yokulinganisa amandla, inokubonisa ixesha, ikhowudi yealam, njl.
5. Indlela yokulawula umrhumo osuka kude kunye nasekhaya
8.Umatshini wokuthwala unxibelelana ngothungelwano lwentambo yombane ngaphandle kwesidingo sokutsala enye ucingo.
2.Sebenzisa iteknoloji yokulungisa idigital kunye nenkqubo ye-SMT.
4.Uwona msebenzi ophambili: umlinganiso kunye nokuchonga, ulawulo lweefizi ezikude, ukuqinisekiswa kokhuseleko kunye nokufihlisa, umboniso, ukurekhodwa komsitho, ukukhulula, ixesha, ukukhupha iziphumo, njl.
I-5.Manganese ye-shunt yethusi kunye nemodyuli ye-NB:
Okwangoku ithatha indawo yokuhombisa iluhlobo oluqinileyo kunye noludidi olubanzi lwe-manganese.
Imodyuli ye-NB: Unxibelelwano lothungelwano lwe-IoT, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi. Ixhasa uqhagamshelo oluphezulu kakhulu lwezixhobo ezineemfuno zonxibelelwano eziphezulu
6.Umodyuli wekhonkco: Nxibelelana ngothungelwano lwentambo yamandla ngaphandle kwesidingo seentambo ezongezelelweyo.
Imodyuli yeLora: Unxibelelwano olude olungenacingo lomgama omncinci.
Imodyuli ye-GPRS: inethiwekhi yoluntu ehambayo (2G inethiwekhi).
7.Card Ukukhetha kunye nendlela yokunxibelelana: Ikhadi le-CPU / ikhadi lokunxibelelana logic / ikhadi le-SD. I-RS485, i-infrared, umbane ophethe umbane
8.Imiboniso yolwazi: Ukusetyenziswa kombane okongezelekayo kwinyanga yangoku nakwinyanga ephelileyo, inani elibonisa amandla ombane kunye nexabiso elipheleleyo lokufumana amandla ombane, umhla kunye nexesha, ikhowudi yealam okanye ukukhawulezisa, imeko yokunxibelelana, inani leemitha zamandla ombane, njl.
Imodyuli ye-9.Metering kunye nemodyuli ye-NB: I-chip ye-metering isetyenziselwa ukulinganisa amandla asebenzayo e-bidirectional kunye namandla amane asebenzayo e-quadrant. I-loop isampulu yevolthi yamkela ukwahlula amandla ombane.
10.Optional umsebenzi- switch eyakhelwe-ngaphakathi
Uhlobo lokufikelela oluzenzekelayo olukhethwayo okanye uhlobo lokufikelela, umsetyenzana onganyanzelekanga-wokutshintsha owakhelwe ngaphakathi
iswitshi esakhiweyo: isitshitshisi esijikeleze isetyhula sifakwe ngaphakathi kwimitha, kwaye imitha idityanisiwe, izibonelelo: ulwakhiwo olulula kunye nexabiso eliphantsi
11.Omsebenzi otyunjiweyo-tshintsha ngaphandle
Uhlobo lokufikelela oluzenzekelayo olukhethayo okanye uhlobo lokufikelela, umsetyenzana onganyanzelekanga - switch yangaphandle
Tshintshela ngaphandle: Isithambisi sokujikeleza esincinci sisethelwe ngokwahlukeneyo, imitha yombane ilawula ukuvulwa / ukuvalwa kwesiqhekeza sangaphandle sesefu yokulawula
izibonelelo: ikhefu lesekethe yangaphandle, ukuphazamiseka okukhoyo ngoku, akukho lula ukuba kungonakaliswa.
Umbane wevolumu I-3 × 220 / 380V
Ukucaciswa okwangoku 3 × 1.5（6）A、 3 × 5（20）A、 3 × 10（40）A、 3 × 5（60）A、 3 × 20（80）A
Inqanaba lokuchaneka Inqanaba le-0.5 esebenzayo, Inqanaba lokuSebenza 2, ii-0.5seconds / ngosuku
Ukutya umbane Umgca weVoltage: <= 1.5W, 5VA; umgca wangoku: <1VA
Imitha rhoqo (imp / kWh) 6400、400、240
Unxibelelwano I-RS485: 2400bps I-infrared: 1200bps DL / T645-2007
Edlulileyo: Isigaba esinye semitha yamandla ombane
Okulandelayo: Amanqanaba amathathu emitha yombane
Imitha ezintathu zoMbane
Imitha ezintathu zeMitha yaMandla
Amanqanaba amathathu eSigaba seKhadi le-Smart Prepaid Energy Meter
Amanqanaba amathathu eSigaba se-Kwh Imitha
Isigaba esithathu seSmart Energy Meter